၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ SSA တို့ကြား တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တပ်မတော်သည် ဒေသခံပြည်သူ့စစ်များကို SSA ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို စောင့်ကြည့်နိုင်စေရန်အတွက် တပ်ဖြန့်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သောတိုက်ပွဲများတွင် SSA တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့သည် မြန်မာတပ်မတော်က ဓာတုလက်နက်များကိုသုံးစွဲခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးများကိုလည်း အတင်းအဓမ္မ ပေါ်တာဆွဲခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ကျောင်းဆရာမအချို့လည်း အသတ်ခံခဲ့ရသည်။
↑ သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ။ အတွဲ-၂။ နေပြည်တော်: လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန။ မေ ၂၀၁၅။ pp. ၆၄။
↑ Militia men from battlefields deserting Archived3September 2014 at the Wayback Machine.. Shanland.org (19 May 2011). Retrieved on9September 2011.
↑ Shanland။3September 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Junta army employs more militias against Shan rebels Archived3September 2014 at the Wayback Machine.. Shanland.org (16 May 2011). Retrieved on9September 2011.
↑ Being honest about using CW Archived3September 2014 at the Wayback Machine.. Shanland.org (7 June 2011). Retrieved on9September 2011.
↑ Junta army has women porters lead the way in war zone Archived3September 2014 at the Wayback Machine.. Shanland.org (22 April 2011). Retrieved on9September 2011.
↑ More killing by unidentified cutthroats reported Archived3September 2014 at the Wayback Machine.. Shanland.org (21 April 2011). Retrieved on9September 2011.
↑ Villagers in war zone killed by unidentified cutthroats Archived3September 2014 at the Wayback Machine.. Shanland.org (19 April 2011). Retrieved on9September 2011.
↑ Attacks in central Shan State။ 28 April 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ခရိုင်:လားရှိုးခရိုင် မြို့: တန့်ယန်းမြို့
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တန့်ယန်းမြို့နယ်&oldid=729644" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၅:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။